Pesita, Zafy, AAA... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tantara mitohy ny momba ny resaka pesita. Tsy nitsahatra nanaraka ny vaovao momba ny resaka pesita ny maro. Voafehy hoy ny mpitondra tany ampiandohana, mi tombo hatrany anefa ny isan’ny maty. Voafehy toka ve ? Raha tsy voafehy izany dia efa azo novisavisaina ny ny fahafatesan’olona maro ?
Dia hoy ny Andy Rebabe, poety iray mpiara-dalana amintsika eto :
MIZESTA AMIN'NY PESTA !
Ny pesta iadiako tsy aretina mandringana
Fa ny haratsiam-panahin'ireo tsy sahy mandingana
Tokonam-baravaran'ireo tsy misy atokona
Fa resy atambokon'
Fa firifiry moa ireo be tatasika
Be resaka masiaka
Fa afaka hanarina ireo fadiranovana
Fa tsy mahatanty
Ny mifanerasera na mitotototo
Ireo tandalerin-doto ?
Zarany aza misy fitobiam-pako
Fa ny voretra fiaina
No mpitondra aretina
Fa izy tsisy pentina !
Zarany aza misy voalavo sy parasy
Anasoketana fa ny malagasy
No tsy mahatandrin-tena
Dia inian-tampenana ny vava indrindra indrindra
Sao mipiti-drora mamindra dia mamindra
Irony mikraoba tsy fanta-pihaviana
Be ny ho ripaka eto ho azom-panaviana
Maty tsy azo alevina ao am-pasandrazana
Fa atokan-toerana zara raha ho tazana...
Pesta, hono, pesta
Betsaka ny zesta
Ny tsy marimarina
Ny tena pesta eto sy aretina mandringana
Dia ny fitiavan-tena sy ny fingampingana
Ny fanahy iniana atao hanambakana
Ny vahoaka maro tsy ho tan-dalàna.
Ny tena pesta eto natao hiadiana
Dia ny tsindry bokotra sy ny fijaliana
Mampifararemotra vahoaka isan'andro
Fa voavidy vola ireo natao hitandro
Ny anjara filaminana
Ka ny kely azo manjary anombinana
Anaovan-kolikoly sy aferafera
Amin'ny asa bizina sy ny serasera...
Andy Rebabe /zoma 13 oktobra 2017 (sao dia ataon'ialahy hoe...)
P E S T A C I T O !
Kohaka kely sendra tao an tenda
Tsaky nohanina ka nahakenda
Tsisy fanontaniana hoe : "Ahoana ity ?"
Tonga dia voaroaka avy any Dzaoudzi
Mba nanazava hoe:"Izaho anie...!"
Tsy nisy resaka fa avy dia billet
Naterin’ny polisy tao am aeroport
Tsy mila tombohina ny passeport
Vao Gasy mikohaka dia efa dehors
Nefa ny bandy mba olona d'or
Ny asa rehetra dia mbola tsy vita o !
Lazaina fa tratry ny PESTACITO
Dia efa afa baraka isika zalah
Fa tena gravy ty eto Mada
Fa na olona sendra nandeha tevi-doha (ran'orona)
Dia efa voaroaka fa "on s'en fout"
Ka hitoka monina isika angamba
Satria koa ny eto efa tanin’ny jamba
Fa na inona zavatra miseho eto
Raha vao misy miteny dia hoe "Aforeto!"
Ny pesita tsy voafehy dia indro nidonam-pahoriana indry ny firenena. Nodimandry ny 13 okitobra ny filoham-pirenena Albert Zafy. Zoma io andro io. Andro ratsy ho an’ny tandrefana.
Maty ve vao Ramalala?
Mody ho hava-mahalala,
dia mba latsa-dranomaso,
mitrotro ireto voninkazo!
Indrisy nefa fahavelony,
sanatria toa zary helony:
'lay izy mbola niatrik’ady,
nailikao raha niangavy!
Raha iny izy nitaraina,
nila vonjy ho avotr'aina.
Moa noheverinao akory?
Mainka ianao toa nampahory!
"Velona" izy tsy nahoana,
izao miseho fa hoe: "misaona"?
Fa fahavelony nariana,
dia maty ve vao havan-tiana?
Nitiah Nosy 07/11/15
Maty vao Ramalala, maty…
…VAO OMENA VONINAHITRA
Efa maty ianao, vao omena voninahitra
Nefa fony velona, toy ny fako s'irony ahitra
Nahilikilika ery, natao tsinontsinona
Fa rahefa nodimandry, vao mody hajaina tahaka ny inona !
Ventesina ombieny, f'ianao 'lay demokraty
Ankalazaina izany, rahefa indro ianao fa maty
Kanefa nihomehezana, fony velon'aina
Naongana mihitsy aza, satria hoe tsy nilaina.
'Zao ianao nandao, zareo mody malahelo
Jereo fa miondrikondrika, mody mamafa lelo
Nefa taloha ianao nogainy, hoe mpanao "mada raid"
Filoha tsisy apoaka, mpandany vola tena gaigy.
Dia hasampy anao izao, 'lay voninahitra ambony
Anefa ianao tsy hahatsapa n'inona n'inona intsony
Toa fihatsaram-belantsihy, anefa akory atao
Tsy nomen-jareo mihitsy io, fony fahavelonao.
Koa mandria am-piadanana e, ny anao efa vita
F'izahay velon'aina eto, mbola hifankahita.
- partage autorisé -
[fahatsiarovana ny nahafatesan'Andriamatoa Zafy Albert, Filohampirenena teo aloha]
TMaty vao tsisy pentina ilay Filoha kanefa dia tsy nisalasalana nanaovana empêchement ary ankehitriny toa vitsy mpandova zara raha nahafeno ny Palais des sports raha toa Mahamasina no noheverina ho sahaza ny lazany. Fitia ambava ihany tokoa va re ?
Fa nisy koa ny fanakatonana ny ozinina Tiko na AAA ao Andranomanelatra. Hoy ny poety mahakasika izany
SENDRA MPITONDRA JIOLAHIMBOTO
Tsy mahagaga raha hoe gisitra ianao ry Gasikara
F'ireo mpitondra anao dia ratsy saina fa tsy tsara
Tena ory hava-manana sady tena be fialonana
Mpihatsaravelatsihy daholo rehefa mivavaka am-piangonana.
Rehefa misy fety masina na irony fihaonambe
Dia hitanao zareo, f'indreo miseho tele
Toa mpitondra masina, mpivavaka tokoa
Fa raha loaranao ny fony, dia feno lolom-po.
Anaovany antsonjay, 'zay tiam-bahoaka sy mamy hoditra
Amoronany dosie, 'zay miseho ho mpanohitra
Dia alainy ireo be baoty, hatao biby fampitahorana
Herisetra no hany tokana, ampiasainy ho vahaolana.
Dia toy izany no mahazo, ilay "Vita malagasy"
Nakatona, nafody, fa "advà" tena mafy
Tsy ivakiany loha 'zay mpiasa tsy hihinan-kanina
Sendra mpitondra faikam-boto : mpitondra tsy milamina.
Ny dahalo any atsimo, manaram-po sy miridana
Ny pesta tsy voafehy, fa vao maika toa mandringana
Fa tsy dia ivakiany loha e, tsy laharam-pahamehany
F' ilay "Vita malagasy" ihany, no kingainy hopotehany.
Tsy mahantra ianao ry Gasy, fa nampahantraina
Sendra mpitondra jiolahimboto, ambany toe-tsaina.
Voalaza fa noho ny kabary nataon’ny Ben’ny tanana tao amin’izany Carlton izany ary teny imasom-bazaha ka nahavasoka ny mpitondra no nahatonga izao fanakatonana izao efa teo koa ny resaka Samva izay tsy çà va mihitsy no nandraisan’ny mpitondra foibe azy.
Dia izay aloha ny tafatafa anio fa samia velon’aina dia amin’ny manaraka indray manao misimisy irariana ho ny soa no ho betsaka toy ny hoe nofy sisa ilay resaka pesita.